RASMI: Xiddiga ku guuleysatay abaa-marinta goolkii ugu fiicnaa xili ciyaareedka ee tartanka Champions League oo la shaaciyay – Gool FM
RASMI: Xiddiga ku guuleysatay abaa-marinta goolkii ugu fiicnaa xili ciyaareedka ee tartanka Champions League oo la shaaciyay
(Yurub) 09 Agoosto 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaal-marinta goolkii ugu fiicnaa tartanka Champions League-ga xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, kaasoo uu ka dhaliyay naadiga Liverpool.
Lionel Messi ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxda Liverpool, kulankii lugta hore ee wareega afar dhamaadka tartanka tartanka Champions League-ga ay guul 3-0 ku gaareen garoonka Camp Nou.
Bogga rasmiga ah Twitter-ka ee tartanka Champions League-ga ayaa loogu hambalyeeyay Lionel Messi inuu ku guuleystay abaal-marintan, wuxuuna ku helay codka taageerayaasha.
UEFA ayaa horey u shaacisay liiska 10-ka gool ee loo codeynayo kuwaasoo ku tartamayay goolkii ugu quruxda badnaa Yurub, Cristiano Ronaldo ayaana abaal-marintan ugu tartamayay 2 gool, iyo Ivan Rakitić oo isna 1 gool ku lahaa.
“Koobka Champions League kama foga kooxda Juventus iyo Cristiano Ronaldo” – Marcelo